Radio Dhangadhi News | Sunau Man Kholera
१६ वर्षे अविवाहित गर्भवती किशोरीको उपचार नपाउँदा मृत्यु
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा प्रसुती गराउन ल्याएकी एक १६ वर्षकी किशोरीको ज्यान गएको छ ।
अठासी किलो सुन प्रकरणमा थप पाँच पक्राउ
महानगरीय अपराध महाशाखाले ८८ किलो सुन ओसारपसार गरेको आरोपमा थप पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
थारु बस्तीमा सखिया नृत्यको रौनकता
सामाजिक सद्भाव र धार्मिक भावनाले ओतप्रोत सखिया नृत्यको रौनकता अहिले कञ्चनपुरका थारू बस्ती छाएको छ ।
सुरु भयो दशैं, नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापना
शिवपुरी धामको कार्यसमिति निर्विरोध
नयाँ नोट–दशैं संस्कृतिको अभिन्न अंग
एक हजार चार सय कर्मचारी सरुवा
बैतडीका अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा
स्थानीय सरकारहरू दिगो विकासका लागि बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिनुपर्छ ।
कोही किन भ्रष्टाचारमा समातियोस् ? जब भ्रष्टाचार गर्नेले चुनावका बेला दलमा लगानी गरेको हुन्छ भने ऊ कसरी कारबाहीमा परोस् ?
पितृयज्ञ गर्दा मन, वचन र शरीर शुद्ध हुनुपर्छ । अनेकतिर भड्किरहेको मन, अशुद्ध शरीर र वचन सूक्ष्म शक्तिसँग जोडिन सक्दैन ।
मेक्सिको सिटी, ४ असोज: मेक्सिकोमा मङ्गलबार राति गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २४८ पुगेको समाचार छ ।
देउवाको अमेरिका भ्रमणमा साढे चार करोड खर्च हुने : यस्तो छ खर्च विवरण
मेक्सिकोको दक्षिणी तटीय क्षेत्र नजिकै प्रशान्त महासागरमा ८.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।
सामान किन्नका लागि गौरिफन्टा बजार पुगेका केही नेपालीलाई भारतीय व्यापारीले हातपात गरेको विरोधमा उनीहरुले विहान देखि दिउसो २ बजेसम्म गौरीफन्टा नाकामा धर्ना दिएर बन्द गराएका हुन ।
चीनले आफ्ना सैनिक प्रमुखमा ली जुओचेङलाई नियुक्त गरेको बताइएको छ । भारतसँग लामो समयसम्म विवाद चलिरहेका बेला चीनले आफ्ना सैनिक प्रमुखलाई परिवर्तन गरेको हो ।
एकातर्फ विवाहको ४४ औं वाषिर्कोत्सव र अर्कोतर्फ आफ्नो आत्मकथा ‘महको म’ विमोचन ।
“अहिले म साना साना भाइबहिनीहरुसँग पढ्ने काममा व्यस्त छु,” मानन्धरले सोमबार बेलुकी पत्रकारहरुसँग भनिन्, “म अहिले स्कूल जान्छु भन्दा कति महिलाहरुलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ । अहिले म कक्षा ९ मा अध्ययनरत छु । कक्षा ८ मा भर्ना भएर परीक्षा दिएकी हुँ ।”
तर, राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूतिका रुपमा घोषणा गरिएको छैन। किन जो व्यक्तिले ऐतिहासिक र राष्ट्रप्रति गरेको योगदान र मिथाप्रति गरेको घनीभूत संघर्षलाई कदर गर्दै नवआगन्तुक उर्जाशिल वर्गलाई उनले गरेको ऐतिहासिक कामलाई अनुभूति गराई राष्ट्रिय विभुति घोषणा हुनुपर्छ भन्ने आवाहन र अपिल गर्नुपर्छ। उनले जुन नेपाल प्रति आफ्नै सुदीर्घ र ऐश्र्वयाली इतिहास रचेको छ।
यो जीवनलाई पृथ्वीको सबैभन्दा जुझारु जीवन सोही कारण मानिएको छ । यसको जिउको आकारका कारण यसलाई पानीको भालु पनि भनिन्छ ।
स्वयंसेवी तथा केही भान्छेहरु मिलेर एउटा यस्तो अमलेेट तयार पारे जसको स्वाद त केवल एउटा सहरले मात्रै चाख्न पायो तर चर्चा चाहीँ विश्वभर नै भयो ।
कार्टर नामले आफ्नी छोरीको दृढ इच्छाशक्ति राख्नमा सहयोग पुर्याउने विलको विश्वास छ । पुरुष नै पुरुषले भरिएको परिवारमा जन्मिएकी कार्टर लुईसको जन्मपछि परिवारमा खुसीयाली त छाएकै छ त्यसले शहरभरि नै तहल्का मच्चाएको छ ।
“मसँग छ खाली जुन, प्रकाश छ तिमीसँग” बजारमा
Nepal VS Philippines Live Football Match - AFC Qualifier Round [Live Streaming]